Yini isiyaluyalu: izici, ingozi kanye nezeluleko | I-Network Meteorology
IsiJalimane Portillo | 15/06/2022 16:09 | Ukwahlukanisa
Uma usuzohamba ngendiza, kungakhathaliseki ukuthi yinde noma yifushane kangakanani, kuhlale kunokuthile okusenza sishaywe uvalo. Uma indiza ibambezelekile noma ikhanseliwe, uma isuke kungazelelwe noma yahlala, noma ngisho noma sishaye ama-bumps ambalwa ohambweni. Izindiza ziba nesiyaluyalu lapho zinyakaza kungazelelwe futhi ziqala ukuzamazama kungalindelekile, futhi lokhu kunyakaza kungabangelwa izinguquko zejubane lendiza, indlela yokuhamba komoya, nezimo zezulu ezihlukene. Nokho, abantu abaningi abazi yini isiyaluyalu.
Ngalesi sizathu, sizonikezela lesi sihloko ukuze sikutshele konke okudingeka ukwazi mayelana nesiyaluyalu, yiziphi izici zakhona nokubaluleka kwakho.
1 yini isiyaluyalu
2 Zivame nini futhi kuphi?
3 Izinhlobo zezinxushunxushu
5 Amathiphu okubhekana nesiyaluyalu
Igama elithi turbulence lisuselwa kwelesiLatini elithi turbulentĭa, elisho isimo sesiyaluyalu (ukuphazamiseka noma ukuyaluza). Indiza kungashiwo ukuthi iba nesiphithiphithi lapho ihamba ngobudlova ngenxa yezinguquko zejubane nendlela yokuhamba komoya. Ukuphazamiseka kwenzeka lapho izinhlayiya zomoya ziphazamiseka, ngokuvamile ngendlela yama-windmill. Isiyaluyalu sidalwa izimo zezulu ezahlukene.
Izimbangela ezivame kakhulu ukwakheka kwamafu (ngokunembile kakhulu: amafu akhula aqonde phezulu), iziphepho, nokusalungiswa kwezintaba noma imifudlana yejethi. I-Wind shear, enye into yesimo sezulu ethinta ukundiza, wushintsho olungazelelwe emandleni nasekuqondeni komoya.
Olunye uhlobo lwengozi olungatholakala ngesikhathi sendiza isiyaluyalu esikhiqizwa indiza uqobo. Zenzeka lapho umthamo omkhulu womoya ushayisana nezimpiko zendiza. Kuzo zonke izimo, abashayeli bezindiza benza izivivinyo nokuvivinya ukulawula noma yisiphi isimo esiqhamukayo.
Zivame nini futhi kuphi?
Ezindizeni zasebusuku noma ezindizeni zasekuseni, kuyaqabukela ukuba khona kwezinxushunxushu ngenxa yokuthi ukugeleza komoya kuhamba kahle ngalezi zikhathi zosuku. Ngakolunye uhlangothi, uma sindiza emini, singase sizwe ukunyakaza phakathi nohambo.
Ngokuvamile zenzeka ezindaweni eziphakeme eziphansi ohambweni olufushane olujwayelekile, kodwa ezinye izindiza ezithatha uhambo olude azihlukile. Uma sindiza sidlula eNdiya noma eMpumalanga Ephakathi, kungase kube nezibhelu.
Izinhlobo ezintathu zeziyaluyalu zingabonakala ngokucacile:
Isiyaluyalu esincane: Lokhu ukunyakaza okuncane okungalindelekile kwendiza okungase kusenze sime singanyakazi endizeni.
Isiyaluyalu esimaphakathi: Lokhu ukunyakaza okubikezelwayo, akusivumeli ukuba sime endizeni futhi singawa.
Isiyaluyalu esikhulu: Lokhu kubi kakhulu kwezintathu, indiza izohamba ngendlela yokuthi sizozizwa sinamathele esihlalweni, noma "sizondiza" siphume esihlalweni.
Isiphithiphithi asiyona inkinga enkulu uma kuziwa ekuphepheni kwezindiza. Kodwa phambi kokungaziwa, kujwayelekile ukuthi abagibeli bazizwe besaba ngisho nesiyezi. Akufanele sesabe isiphithiphithi ngoba izindiza zenzelwe ukumelana nezinxushunxushu ezinodlame kakhulu. Ngaphezu kokulungela ngokugcwele ukubhekana nalezi zinkathazo, abashayeli bezindiza banamakhono okubhekana nesiyaluyalu. Ukwehlisa ijubane nokushintsha ukuphakama kuyingxenye yalokho.
Nakuba zinganembile ngokuphelele, njengoba imvelo ingabikezeleki futhi isimo sezulu singashintsha noma nini, izibikezelo nezinzwa zifakwa kwamanye amakhabethe ukuze kubonakale isiphithiphithi nobukhulu baso. Ngaphakathi endizeni, kunezici eziya ngokuya ziba neziyaluyalu. Ngokwesibonelo, izihlalo ezitholakala maphakathi namandla adonsela phansi kanye namaphiko endiza mancane amathuba okuba zibone lezi zinguquko, kuyilapho izihlalo ezitholakala emsileni wendiza yizona okungenzeka zaziwaqaphela. Kufanele futhi sicabangele ukuthi uma indiza nesihlalo sikhulu, siyasiqaphela isiyaluyalu.
Njengoba sisebenzisa amabhande ezindizeni lapho sihamba ngemoto, kufanele kube njalo. Ezimweni ezinzima ze-pothole, amabhande ezihlalo bangasindisa ukuphila kwethu noma bagweme imihuzuko ekuhambeni kwezindiza. Uma ungena endaweni enesiyaluyalu, umshayeli wendiza uzokwexwayisa ngombhobho ukuthi kwenzekani nokuthi yini okufanele yenziwe.
Amathiphu okubhekana nesiyaluyalu
Uma ungomunye walabo bantu abesaba ukuhamba ngendiza noma isiphithiphithi kakhulu, ungakhathazeki, ubonile ukuthi abayona ingozi futhi ngokulandela uchungechunge lwamathiphu uzokwazi ukubhekana nabo ngomoya ophansi futhi ujabulele indiza emnandi. Nawa amathiphu alula noma ubani angawasebenzisa ukuze akusize uhambe ngaphandle kokuhlupheka.
Iya endlini yokugezela ngaphambi kokuthi uhambe: Leli thiphu lingaba usizo kakhulu uma uzothatha uhambo olufushane. Yiya endlini yokugezela ngaphambi kokuba indiza isuke ukuze kungadingeki ukuthi uvuke ngesikhathi sendiza. Ngale ndlela ungagwema ukuba nesiyezi ngokuzivocavoca okulula noma ngisho nokubhajwa endlini yokugezela ngesikhathi sokugeleza kwesiyaluyalu. Uma lokhu kwenzeka, bamba isibambo osibonayo ukuze ugweme ukuwa.
Khetha isihlalo sakho: Uma kungenzeka, khetha isihlalo sakho. Ezimweni eziningi, amawindi angakwenza uzizwe uvikeleke kakhulu. Uma unovalo mayelana nendiza yakho, gwema ukuphuma ezimeni eziphuthumayo njengoba uvalo lwakho lungaphazamisa ukuphuma okungase kube khona.
Ukuqonda i-Turbulence: Ngokuvamile, sesaba okungaziwa, ngakho-ke kunconywa ukuthi wazi ukuthi yini isiphithiphithi ngaphambi kokugibela indiza. Uzothola ukuthi aziyona ingozi njengoba zibonakala
Gqoka ibhande bese ugcine izinto ezincane: Uma ungena emigwaqweni emibi, bopha ibhande ukuze ugweme amaqhubu, ukuwa nesiyezi. Futhi gcina izinto zakho zomuntu siqu ziphephile ukuze zingandizi uma indiza ihamba ngokuzumayo.
I-hydration, ukuphazamiseka nokuphefumula: Okokugcina, khumbula lezi zici ezintathu. Kulolu hambo, hlala ugcwele amanzi bese uzama ukuzithikameza ngomsebenzi othile (ungafunda, ubukele amamuvi futhi ulalele umculo). Ezimweni ezicindezelayo, zama ukulawula ukuphefumula kwakho ukuze ugweme ukwethuka.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi yini isiphithiphithi, yiziphi izici zayo kanye nokubaluleka kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » yini isiyaluyalu
Umehluko phakathi kwesimo sezulu nesimo sezulu